महिलाले यसकारण पिउनुहुँदैन रक्सी
scheduleसोमवार फाल्गुन १२ गते, २०७६
हामी सबैलाई थाहा छ, रक्सी तथा चुरोटको सेवन शरीरको लागि अत्यधिक हानिकारक छ । तर पनि हामीमध्ये धेरैले रक्सी र चुरोट सेवन गर्दछौं । तर हालसालै गरिएको एक नयाँ अध्ययनकाअनुसार रक्सी सेवन पुरुषभन्दा महिलाका लागि बढी हानिकारक हुने तथ्य बाहिर आएको छ ।
अध्ययनका अनुसार रक्सीको अत्यधिक सेवनले महिलामा डिहाइड्रेसन हुने खतरा बढी हुन्छ । रक्सीको सेवनले महिलाको शरीरमा हर्मोनहरुको सन्तुलनमा पनि गडबडी ल्याउँछ । रक्सीसँगै र रक्सीसेवन पछि अत्यधिक खानेकुरा खानाले यसबाट शरीरको तौल पनि बढ्दछ ।
महिलाले रक्सी सेवन गर्दा पुरुषलाई भन्दा बढी कलेजो र मष्तिष्कमा खराबी आउने सम्भावना बढ्दछ । रक्सीले महिलाको पाचन प्रणालीमा पनि गडबडी ल्याउँछ । यसबाट महिलालाई समयमै निद्रा पनि पर्दैन । यसले मनमा खिन्नता बढ्दछ । त्यसो त रक्सी सेवन गर्ने महिलाबाट जन्मिने बच्चामा पनि गम्भीर असर देखिन्छ । एजेन्सी
आफ्नो किड्नीको अवस्था थाहा पाउनुहोस् (१० लक्षण र बच्ने उपायसहित)
पाँच दिनमा ५ केजी तौल घटाउने सहज घरेलु उपाय
तनावको नकारात्मक असर दाँतमा
मह खानुहोस् तर, यसरी नखानुहोस्
थाहा पाउनुहोस् कुहिनोको कालो हटाउने अचूक उपाय
यसरी छान्नुहोस् राम्रा टुथ ब्रस
तपाईंलाई थाहा छ ? हृदयघातको कारण बन्न सक्छ पेनकिलर
चार हप्तामा दुई ईञ्च घटाउन सम्भव छ ?
स्याउ खान आउँछ ? याद गर्नुहोस् स्याउको दानामा हुन्छ प्राणघातक बिष
अत्यधिक उपयोगी हुन्छ अण्डा उमालेको पानी, यसरी गर्न सकिन्छ प्रयोग
शरीर फुर्तिलो बनाउन अपनाउनुहोस् यी उपायहरु
लाै जान्नुहोस् मरिचका फाईदैफाईदा
अण्डा र झण्डा वितरण अभियान !
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी ४ चीज कहिल्यै नखानुस्
मोबाइल प्रयोगकर्ताले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
कोरोना भाइरसका कारण २४७१ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ १२ फाल्गुन । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास अझै कम हुन सकेको छ । पछिल्लो एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर...
पोखरा, १२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालोझण्डा देखाउने ४ विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले पोखराबाट पक्राउ गरेको...
किन ‘खप्र’ बन्दैछन् केपी ?
साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १२ फागुन । ओली सरकारको चरित्र र नियतिबारे अनेक चर्चा, शंका र विश्लेषण भए, हुँदै आए । यो कस्तो सरकार...
काठमाडौँ १२ फाल्गुन । गएराति भएको फ्रेन्च लिग वानमा पिएसजीले सानदार कमव्याक गर्दै बोर्डेक्सलाई ४-३ गोलले पराजित गर्न सफल...
कोरोना संकट चुलिन थालेपछि राष्ट्रपतिको आह्वान
सोल, १२ फागुन । दक्षिण कोरियामा प्राणघातक कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई रोक्न राष्ट्रपतिले ‘अभूतपूर्व, शक्तिशाली’ कदमहरूको...
ट्रम्प र मेलानियाद्वारा ताज महल भ्रमण (तस्विरहरु)
आग्रा, १२ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियाले सोमबार ताज महलको भ्रमण गरेका छन् । उनिहरूलाई उक्त अवसरमा...